Dowlad goboleedka Jubbaland oo ku baaqday in wasiirkeeda amniga loo sii daayo si deg-deg ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowlad goboleedka Jubbaland oo ku baaqday in wasiirkeeda amniga loo sii daayo si deg-deg ah
Dowlad goboleedka Jubbaland oo ku baaqday in wasiirkeeda amniga loo sii daayo si deg-deg ah
September 1, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. [Sawir Hore]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo Axad ah walaac uga muujisay xiritaanka wasiirkeeda amniga Cabdirashiid Xasan Nuur kaasoo Sabtidii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Jubbaland ayaa ku tilmaamtay xariga mid xadgudub ah oo loo geystay wasiirka xilli uu safar shaqo ku marayay halkaas.
Bayaanka ayaa intaas ku daray in Jubbaland ay ugu baaqday cid walba oo ku lug lahayd xariga ka dhanka ah wasiirkooda in ay si deg-deg ah ugu soo celiyaan xoriyadiisa.
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur oo loo yaqaan Janan ayaa shalay oo Sabti ahayd lagu xiray garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee Muqdisho, sida ay sheegtay taliye ku xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya Sakiya Xuseen, iyada oo intaas ku dartay in Janan uu ku eedaysanyahay dambiyo culus, kiiskiisana ay hadda baarayaan ciidanka booliiska.
Ciidamada ammaanka oo ka hortagay gaari qarax gudaha Muqdisho
Cadan-(Puntland Mirror) Qarax isbiimayn ah oo lala beegsaday saldhig ciidamada lagu tababaro oo kuyaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Yemen ee Cadan ayaa lagu dilay ugu yaraan 45 qof, sida ay sheegeen ilo-wareed caafimaad. [...]
Madaxweynaha Cabdiweli oo sheegay in Puntland aysan wax faaiido ah ka helin aqalka sare ee Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in aysan wax faaiido ah ka helin aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. “2011-kii marka dastuurka la sameynayay maamulka keliya oo aqalka sare ku doodayay waxay ahayd Puntland,” [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo isniin ah ka hortagay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa gudaha magaalada Muqdisho. Haayadaha ammaanka ayaa sheegay in gaariga oo noociisu ahaa Toyota Noah [...]